Home » Book » Kaararka Kudhinta Kudhinta Quraariga BIXINTA
WADAMADA LACAG LA'AAN AH, waxaad badbaadin kartaa $ 39.99 oo waxaad ka heli kartaa nuqulkaaga bilaashka ah ee Mike Geary ee ugu iibsashada buugga Fat Burning Kitchen! Waa inaad bixisaa khidmad yar oo maraakiibta iyo maareynta.
* Dalabku waa mid ansax ah inta alaabtu socoto. Wax walbaa laguma soo celin doono dalabkani, mar walbana waa inaad bixisaa lacagta yar ee maraakiibta iyo maareynta lacagta. Tani waa habka Mike Geary ee ah dhiirrigelinta hab nololeed caafimaad leh iyo qaab ufaahfaahin leh sameynta buugiisa soo iibsadaha ugu fiican.